IIFILIMU EZINGAMA-20 ZEGREEK MYTHOLOGY KUNYE NALAPHO USASAZA KHONA - ULUHLU LWEEMOVIE
Iifilimu ezingama-20 zeGreek Mythology kunye nalapho usasaza khona
Ukuthatha ingxelo yamabali amaGrike kunye nokuyibeka ebomini kwiscreen esikhulu kunzima kakhulu. IHollywood ibinayo
Ukuthatha ingxelo yamabali amaGrike kunye nokuyibeka ebomini kwiscreen esikhulu kunzima kakhulu. IHollywood ibinokhetho lokubonisa la mabali akudala kwaye iwadlale kwiscreen esikhulu ixesha elide. IHollywood ichwetheza ngokuchanekileyo amabali ezi zidalwa zingokobuthixo, oothixokazi kunye namabali ngelixa behombisa ubukrwada babo kwiscreen esikhulu.
Iintsomi zamaGrike bekusoloko kuthethwa ngazo kwimifanekiso eshukumayo kangangexesha elide. Imifanekiso eshukumayo yentsomi yamaGrike inokutyhila iyelenqe labo kwisihloko sefilimu kuyo nayiphi na into ebonakalayo okanye engabonakaliyo, ngelixa ezinye izihloko zefilimu zinokuthiywa ngegama leentsomi zamaGrike, kodwa azinanto yakwenza nokubonisa ezo ngxelo. Ukwazi malunga neentsomi zamaGrike, sikunika uluhlu lweeMovie ezingama-20 zamaGrike eziGqwesileyo ezifundisayo kwaye ziyonwabisa.
1. UHercules Unchained (1958)
umlawuli : UPietro Francisci
Ababhali : U-Ennio De Concini, uPietro Francisci
Abalingisi : USteve Reeves, uSylvia Lopez
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 4.5
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : N / A
Iqonga lokusasaza : Ividiyo enkulu yeAmazon
Siyakholelwa ukuba le filimu yeyona nto ibalaseleyo kwimifanekiso eshukumayo kaHercules. Ngokukhethekileyo, wonke umntu kufuneka abukele uHercules (1957) kuqala, njengoko iHercules Unchained ikukuphuma kwayo, kodwa ayenzi mahluko ngokubanzi, kuba iHercules Unchained yifilimu ezimeleyo nanini na. Ukufumanisa indlela amaphupha kaHercules anokuchazwa ngayo ngokukhululekileyo, jonga IThe Legend of Hercules (2014) ukutolikwa kwangoku kwale fantasy. Ngokunjalo nawe unokubukela umboniso bhanyabhanya onamandla weHercules (1997) weDisney, evumelana nakoluphi na uvavanyo.
2. UJason kunye neeArgonauts (1963)
umlawuli : UDon Chaffey
Ababhali : UJan Funda, uApollonius waseRhodes, uBeverley Cross
Abalingisi UTodd Armstrong, uNancy Kovack
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 7.3
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 89%
UJason kunye neqela lakhe labakhweli beenqanawa baya kwimishini emangalisayo yokufumana uboya obuqaqambileyo. Lo mboniso bhanyabhanya ungumzekelo ungafundiswanga kufuneka ubonakale kumntwana ngamnye emhlabeni, ngolwimi lwabo. Ifilimu ibonwa njenge-clique engumzekelo kwaye ibalaseleyo phakathi kwezinye iifilimu zephupha, ixesha.
3. IiUlysses (1954)
umlawuli : UMario Camerini
Ababhali : UIvo Perilli, uFranco Brusati, u-Irwin Shaw, uBen Hecht, u-Ennio de Concini, uMario Camerini
Abalingisi : USilvana Mangano, eKirk Douglas
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 6.7
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 59%
U-Odysseus uzama ukutyelela ilizwe lakhe kwakhona emva kokugqitywa kwemfazwe yeTrojan, ukanti wenza iinkumbulo ezinzulu ngokwenza njalo. Le filimu inomlingo obalaseleyo. Kukho iifilimu zentsomi zamaGrike ezixhomekeke kwilivo lika-Odysseus, kodwa eli bali linzima ukubetha. Indawo ene-Cyclops ngumsebenzi wobugcisa.
umlawuli : UBrett Ratner
Ababhali : URyan J. Condal, uEvan Spiliotopoulos
Abalingisi : UDwayne Johnson, uIan McShane
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 6
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 58%
UHercules ngumdlalo bhanyabhanya wezenzo waseMelika ka-2014 oququzelelwe nguBrett Ratner, Kuxhomekeke kwinoveli eyiyo 'Hercules The Whip and Wars'. Lo mboniso bhanyabhanya uyakujongela phantsi ukucinga kwakho malunga nezi ntlobo zemovie kwaye uyonwaba. Nangona kunjalo, inokuphazamisa abantu abazinikeleyo kwiintsomi zamaGrike.
5.U-Percy Jackson kunye neleMbane (2010)
umlawuli : UChris Columbus
Ababhali : UCraig Titley
Abalingisi : ULogan Lerman, uBrandon T. Jackson
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 5.9
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 49%
Qinisekisa ukuba ufunda incwadi kaPercy Jackson, ngaphambi kokujonga imovie. Incwadi inokuninzi kakhulu ekunokuzisa etafileni ngaphezulu kwale filimu inomtsalane. Indawo yam # 1 kumdlalo bhanyabhanya 'yiPoker Face' tune. Ndiyibonile ngokwesiqhelo.
Yintoni iapp app grp
Ukungqubana kweTitans (1981)
umlawuli : UDesmond Davis
Ababhali : Umnqamlezo iBeverley
Abalingisi : UHarry Hamlin, uJudi Bowker
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 6.9
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 68%
Iqonga lokusasaza : INetflix
Ukungqubana kweTitans ngumdlalo bhanyabhanya wamaphupha wase-Australia wase-Australia oququzelelwe nguLouis Leterrier, obonisa uSam Worthington, uGemma Arterton, noRalph Fiennes. Ifilimu ixelela indlela uPerseus, umntwana kaZeus, ashiya ngayo umsebenzi onobungozi wokusindisa ubomi benkosazana uAndromeda. Kolu hambo lwe-epic, uPerseus kufuneka ajongane nezilwanyana ezintle. Ifilimu luvuyo lokwenyani olubonakalayo, ke kwithuba ongakhange ulubone, lungiselela kuba le filimu iya kuyikhathalela ingqondo yakho yoyilo. Ukungqubana kweTitans kwakuneziqhamo, ukuphakamisa phantse i-500 + yezigidi zeedola kwihlabathi liphela.
7.I-Oedipus Rex (ngo-1967)
umlawuli : UPier Paolo Pasolini
Ababhali : UPier Paolo Pasolini
Abalingisi : UFranco Citti, uSilvana Mangano
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 7.4
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 88%
Lo mboniso bhanyabhanya wase-Italiya nguWharf Paolo Pasolini ngumahluko okhoyo kububi bamaGrike, obhalwe nguSophocles. Umntwana uziswa emhlabeni kwidolophu yaseMilan ngeye-1930. Uyise ulahla usana entlango kwaye ugcinwe sesinye isibini.
8. UMnu Atlas (1997)
umlawuli : UKaren Lee Arbeeny
Ababhali : UCharles B. Griffith
Abalingisi : UDanny Nielsen, uTeddie Nielsen
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 5.1
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 40%
Le bhanyabhanya ilahlwe kakuhle kwimiboniso bhanyabhanya iya kwenza ukuba umntu abengaphantsi kweminyaka eli-12 okanye ngaphezulu azinzise, ​​iinyembezi. Inene, ndiyakubongoza ukuba umntu othile kusapho afumane amehlo alusizi kwindawo enye ebuhlungu. Lo mboniso bhanyabhanya sisandulela esingummangaliso sentsomi yamaGrike yabaselula kwaye ngokufanayo iyathandeka ngokwaneleyo ukuba abantu abadala babonakale. UMnu Atlas wenziwa e-Utah, ekufuneka ibe sisixeko esingqongqo ngokukodwa. Ndicinga ukuba isibini sabo besifuna umhlaba ukuba uqonde ukuba banoluvo olulungileyo lwezidalwa zobuGrike.
9. UHelen waseTroy (2003)
umlawuli : NguJohn Kent Harrison
Ababhali : UHomer, uRonni Kern
Abalingisi : USienna Guillory, uMateyu Marsden, uRufus Sewell
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 6.2
Ukugqwesa malunga nale bhanyabhanya / miniseries kukuba ayishiyi ngaphandle umceli mngeni wobukhazikhazi bamaGrike obangele ukuba yonke intliziyo ibuhlungu. Kuyinto engummangaliso ukubona ukuba u-Aphrodite, uthixokazi woKhuleka, uyaziwa njengomdibaniselwano wemfazwe yeTrojan yexesha elide.
10. Ongafiyo (2011)
umlawuli : UTarsem Singh
Ababhali : IVlas Parlapanides, uCharley Parlapanides
Abalingisi : UHenry Cavill, uRobert Naylor
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 46%
Iqonga lokusasaza Umdlali we-MX
Ukungafi 'yifilimu yamaphupha eyindumasi, ephethe uHenry Cavill njengoTheusus, umntu ofayo okhethwe nguZeus, ozanywa nguMickey Rourke, osengxakini enqumla iGrisi ukufumana isixhobo esinokutshabalalisa uluntu. Ngelixa imovie ngokuqinisekileyo ingumboniso omangalisayo womqondisi, 'Ongafiyo' uqalwa yimidlalo yeqela eliphambili. Ngokunconywa kwemveliso kunye nokubonwa okumangalisayo, umboniso bhanya bhanya waba yimpumelelo esisiseko kunye nentengiso.
11. UTroy (2004)
umlawuli : UWolfgang Petersen
Ababhali : UDavid Benioff
Abalingisi : UBrad Pitt, uEric Bana
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 54%
UTroy ’lutshintsho lweengqungquthela ezinkulu zikaHomer, ezilandela ukuhlaselwa kukaTroy ngamagunya aseGrisi ahlanganisiweyo kunye nokubalisa ikamva lala madoda kuthethwa ngawo. Ukulungelelaniswa nguWolfgang Petersen, ifilimu iyanda kwi-humongous humityity of war legends like 'Warrior' (2000) kunye no 'The Ruler of the Rings'. Ngelixa ibali lefilimu lihlala lijinga kwaye abalinganiswa ngoku kwaye babonakale ngokurhoxa ngokunyanisekileyo, ukanti 'uTroy' ngumbono obonakalayo. Ngokuhlonitshwa kwendalo ephezulu kunye neenkwenkwezi ezihlekisayo, u-'Troy 'waphela eyimpumelelo enkulu kumzi-bhanyabhanya.
Abalingisi : UMaria Callas, uMassimo Girotti
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 7
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 70%
Olu tshintsho ludumileyo lukaJason kunye ne-Argonauts legend zijikeleza umlumbi waseMedea, owanceda uJason kwimishini yakhe kwaye waqinisekiswa nguye ukuba abe sisiqingatha sakhe esingcono. Ekuvukeni kokubuyela kwipropathi yakhe njengengcwele, uJason ushiya iMedea kwaye weds kunokuba abe yinkosazana yaseKorinte. Enomsindo, iMedea yaceba ukubuyisela uJason kunye neqabane lakhe elitsha, ngezihlandlo ezimbi ezilandelayo. Nge-soprano eyaziwayo kaMaria ebiza, uPasolini uhlengahlengisa umdlalo odumileyo wamaGrike owenziwe ngu-Euripides.
13. Inkqubo ye IOdyssey (1997)
umlawuli : UAndrei Konchalovsky
Ababhali : UAndrei Konchalovsky, uChris Solimine
Abalingisi : UArmand Assante, uGreta Scacchi
Okokuqala, zama kwaye ufunde i-sonnet engumzekelo we-Odyssey nguHomer. Khawufane ucinge la mava mahle ngengqondo yakho yoyilo kuphela emva koko ukuba ubukele le nguqulelo intsha kakhulu.
dr ilitye anime umhla wokukhutshwa
14. UAlexander omkhulu (2004)
umlawuli : UOliver Stone
Ababhali : U-Oliver Stone, uChristopher Kyle, uLaeta Kalogridis
Abalingisi : UColin Farrell, uJessie Kamm
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 5.6
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 16%
Iqonga lokusasaza : INetflix, kunye neVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UAlexander omkhulu, bonke ubungangamsha bakhe! Nangona uAlexander engumntu wokwenene kunye nokulwa ngexesha lomdlalo bhanyabhanya okwenzekileyo, iiakhawunti ezininzi kumdlalo bhanyabhanya zixhomekeke kwiintsomi kunakwinyani. Ngezigidi ezili-150 + zeedola njengesicwangciso sezemali, u-Oliver Stone waqala ukucacisa iinzame zommangaliso waseGrisi jikelele ngenye indlela. Ngendlela ethandwayo kaFreudian, inkosi yayigubungela iziqwenga zokuqala zobomi begosa laseGrisi elidala ngoku kwaye lalisoloko likhulu kwaye ngamanye amaxesha linogonyamelo.
15. AmaSpartan angama-300 (1962)
umlawuli : URudolph Maté
Ababhali : UGeorge St.George, ugo Liberatore, uGian Paolo Callegari
Abalingisi URichard Egan, uRalph Richardson
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 6.6
Uya kuziva ukhathazeke kakhulu ngenxa yamaSpartan angama-300 emva kokubukela le filimu. Umba wakho wamaSpartan angama-300 nawo uya kunyuka ngokusisiseko emva kokubukela le filimu ingumzekelo. Inomdla kakhulu. Kubo bonke abagqibeleleyo ngaphandle apho abacinga ukuba le filimu ichongiwe nembali yakudala kunokuba ibe yintsomi yamaGrike, okhathalayo. Ndiqinisekile ukuba yayingengawo amaSpartan angama-300.
16.Women Wonder (2017)
umlawuli : Patty Jenkins
Ababhali : UAllan Heinberg
Abalingisi : UGal Gadot, uChris Pine
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 93%
Ifilimu ixhomekeke kwifom ephilisiweyo kaWilliam Moulton Marston. Kwifilimu ye-2017 DC Funnies, sibukele ukuqala kwebali likaDiana, inkosazana yamaAmazon. UDiana ligama lesi-Latin lika-Artemis, isithixokazi esingumGrike sasendle, sileqa, kwaye sivuthiwe kwaye ama-Amazon ayengabalweli abangamakhosikazi abangakholekiyo kwiintsomi zamaGrike.
Ukungqubana kweTitans (2010)
umlawuli : ULouis Leterrier
Ababhali : UTravis Beacham, uPhil Hay, uMat Manfredi
Abalingisi : USam Worthington, uLiam Neeson
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 5.8
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 27%
Iqonga lokusasaza : INetflix, iMX Player, kunye neAmazon Prime Video
Ukuxabana kweTitans ngamava aphuphayo kwaye kukuphinda ubalise ibali lesiGrike lamaPerseus, apho uPerseus kufuneka alwe noMedusa kunye noKraken ukusindisa iNkosazana uAndromeda. Ifilimu khange ikhule kakuhle, ithathela ingqalelo ubushushu obugqithisileyo be-CGI yobudala obutsha. Nangona kunjalo, ngomxholo wesandi nguBeverley Cross kunye nemiboniso eyomeleleyo yabalingisi, 'Clash of the Titans' yiwotshi ebandakanyekayo.
18. Mzalwana, Uphi na?
umlawuli : UJoel Coen
Ababhali : UEthan Coen, uJoel Coen
Abalingisi : UGeorge Clooney, uJohn Turturro
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 7.7
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 77%
Iqonga lokusasaza : INetflix, iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
O Mzalwana, Uphi na? Umboniso wokwenza umdlalo ohlekisayo oxhomekeke kumbongo we-epic iOdyssey kaHomer. Yifilimu exhomekeke kukugculelwa okubandakanya iindawo ezininzi kumbongo ongumqondiso. UGeorge Clooney udlala ubuntu buka-Ulysses Everett McGill, ozama ukuthobela isigwebo sakhe eMississippi, nalapho ke udibana noDelmar noPete. Abathathu bathabatha uhambo lokufumana ubuncwane obufihliweyo, kwaye kwinkqubo, badibana nabalinganiswa abohlukeneyo kwaye badibana neengxaki ezininzi kunye nokuzibophelela.
umlawuli : UZack Snyder
Ababhali : UZack Snyder, uKurt Johnstad, uMichael B. Gordon
Abalingisi : UGerard Butler, uDavid Wenham
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 7.6
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 61%
I-300 ngumdlalo bhanyabhanya obalaseleyo waseMelika wonyaka ka-2006. Lo mboniso bhanya-bhanya uququzelelwa nguZack Snyder, obonisa uGerard Steward noLena Headey, eqhutywa ziiFunnies zeFirmright Mill, ezichaza ukungqubana kweThermopylae. Eli yelenqe libonisa inkosi yase-Austere uLinodius, edlalwa nguGerard Steward, kunye namajoni akhe alula angama-300. Balwa idabi nxamnye nothixo wamaPersi, inkosi uXerxes inqununu eyayidlalwa nguRodrigo Santoro, kunye nesihlwele sakhe samajoni angaphezu kwama-100 000. I-300 yajika yaba yeyona bhanyabhanya yesibini ibalaseleyo ka-2006, emva nje kwabucala kwiCaribbean. Amagqabantshintshi abucala ayashwankathela uluvo lwam malunga nefilimu; ngumsebenzi wobugcisa obalaseleyo.
Ngaba ungoyena ulandelayo erhuqwayo
20. UHercules (1983)
umlawuli : ULuigi Cozzi
Ababhali : ULuigi Cozzi
Abalingisi : ULou Ferrigno, uSybil Danning
Ukulinganiswa kwe-IMDb : 4
Ukulinganisa iitamatisi ezibolileyo : 25%
Le vidiyo ishiye isiphako esikhulu ngaphambili kwiingcinga zam njengomncinci. Ngexesha lokuphinda ndibukele kwakhona njengomntu okhulileyo kwiminyaka eliqela emva kwenyani, ndothuswa ngokumangalisayo yindlela ekuma ngayo ukulingwa kwexesha. Yifilimu engakholelekiyo. Lo mboniso bhanyabhanya wawuyindlela ethelekisayo. Inika inqaku elibandakanya kuphela i-sci-fi kwimbono yeHercules. Ifilimu ikwanokuqhubekeka okubizwa ngokuba zii-Undertakings zeHercules 2 (1985).
Iintsomi zamaGrike zinempembelelo enkulu kwindlela yokuphila yaseNtshona, kubugcisa kunye nokubhala. Ikwahlala iyinxalenye yenkcubeko yasentshona kunye nonxibelelwano. Ukusukela kumaxesha akudala, iimbongi, amagcisa, abaphengululi, kunye nabavelisi beemovie bafumana inkuthazo kwi-Greek Mythology. Bafumanise ubuntununtunu nokubaluleka kwezifundo.
Ukubulala uEva weSizini 3, 4 Unxibelelwano noLote Suspense, eNtsha [CAST], Ulindelo olunomdla kunye namathuba amangalisayo
Iingcaphuno eziphezulu nguRobert Downey Jr.
Ukulandelelana kweNdlela kaMad Max Fury- Iindaba ezizayo, Ngaba kukho nasiphi na isiXeko esitsha esiGungqisa eli xesha, Umhla woMoya kunye nokuGxothwa, uHlaziyo lwamva nje lulapha, Bamba bonke
U-DJ Khaled kunye no-Rapper u-Drake babelana ngomhlolokazi omtsha womculo wokulinganisa ihlobo
UHenry Cavil Usebenzisa ukuGxekwa ngokuLungileyo ukuze akhanye kuWitcher!
Rick And Morty Ixesha 5 Umhla wokuKhutshwa, uPhononongo, Iqonga, iTrailer Kwaye yintoni ngakumbi malunga noMdlalo?
Ukoyikwa kwe-2% yeNetizen Support Kanye West ithathe isigqibo sokubuyela umva kunyulo lukaMongameli wase-US 2020
Ixesha lakho loKhupha i-3 yoSuku lokuKhutshwa, iCast, iPloti, iTrailer kunye nokunye okungakumbi malunga noMdlalo?
Fumana uHlaziyo oluChulumancisayo kwiXesha leNkosana yeNkwenkwana yesi-4; Jonga apha.
UAlita: Idabi leNgelosi yesi-2 yamva nje [UHLAZIYO], Iithiyori, ubuGcisa, isiQendu, iiTrailer, Sinazo zonke iinkcukacha eziNye zaKho
uthini umyalelo weemovie ezimbi zomhlali
lusizi kwaye yedwa izingcaphuno
Ngaba kuyakubakho indoda enye yenqindi isizini 2
iingoma zomculo zesikolo esiphakamileyo 1 iingoma
Umboniso bhanyabhanya kwiintsomi zamaGrike
Ixesha leWestworld 4 likhutshwa